Dacwooyin jirdil oo carruur loo geystey oo dib loo eegayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Claudio Bresciani/TT
Dacwooyin jirdil oo carruur loo geystey oo dib loo eegayo
La daabacay tisdag 14 januari 2014 kl 16.36
Dacwado badan oo ku saabsanaa jirdil la tuhunsanaa in carruur loo geystey ayaa hadda dib loo eegayaa. Saddex ka mid ah dacwooyinkaas waxay gaareen ilaa maxkamadda sare kadib markii dhawr ka mid ah khubarada Iswiidhen ku xeeldheer dembiyada xoog-isticmaalka ah oo loo geysto carruurta ay su’aal ka keeneen.
Arrimahaan dib loo eegayo ayaa ah kuwo waalidka la soo eedeeyey oo caddeynta qur ahi ay tahay warqad faallo ah oo dhakhtar qoray. Balse wax kale oo caddeyn ahi ma jiraan, haddii ay noqon lahayd markhaanti arkaayey in jirdil dhacay.
Inta badan waxaa waalidka lagu eedeeyaa in ay isticmaaleen xoog ruxid ah. Matalanba waxaa la soo sheegay in ilmo muluq ah oo dhowaan dhashay la ruxay, taas u keentay in ay maskaxda dhiig uga furmo. Dhiig maskaxda ku furmaana wuxuu keeni karaa dhimasho ama dhaawacyo halis iyo joogto ah.­